YeeNzululwazi kunye neTekhnoloji yoLwazi lweJografi… kunye noLuntu lwabasebenzisi be-gvSIG eHonduras -Geofumadas
ZeNzululwazi nobuChwepheshe boLwazi lweJografi… kunye noLuntu lwabasebenzisi be-gvSIG eHonduras
NgoJulayi, 2012 Iiphotography, cadastre, Ukufundisa i-CAD / GIS
Ibala Information Geographic sele noko saa e Honduras, leyo ayahlukanga ukusuka kwamanye amazwe Latin American apho iiprojekthi ezininzi wenze utyalo-mali abasindwa ngezibonelelo ezivela ngaphandle okanye nentsebenziswano kodwa ekugqibeleni iphele descontinuándose kumaziko yenkunkuma karhulumente ukubaluleka kolwazi kwaye ngaphandle ekuphumezeni umyalelo esisiseko ukuthintela uphinda-phindo lwamalinge.
Nangona kunjalo, ndifuna ukukhulula iqhinga lokuba ngombono wam unokuba yi-injini ejolise abadlali abahlukeneyo kwaye ngexesha elifanelekileyo liza kulandela inxaxheba yendima emele eGuatemala KwiSunivesithi yeSan Carlos, ububanzi bemibutho yaseCosta Rica kunye Ikholeji yeeNgxelo zeeNjineli kunye namandla olawulo INETER ENicaragua. Zonke izingqinisiso ezilungileyo kodwa ezinobuthathaka bokuchaphazeleka kungekuphela kwendawo kodwa nakwimimandla yengingqi.
Kwaye yile nto ijongana nayo ayililo iziko elikhulu eliyaziyo indlela yokwenza yonke into, kodwa liziko elidibanisa kunye kwaye libonelele ngozinzo kwindawo ebuthathaka: ukuvunywa kwezemfundo. Ndibhekisa kwiSikolo seNzululwazi yezeNdawo kwiYunivesithi kaZwelonke ye-Autonomous yaseHonduras, apho ukuza kuthi ga ngoku kukho iinzame eziguqukayo endinethemba lokuzinzisa kumanqaku alandelayo:
I-Master of Planning Territorial.
Oku kwaqala malunga ne-2004 ngenkxaso yeDyunivesithi yaseAlcalá kunye neArhente yaseSpain yokuBambisana kwiminyaka yokuqulunqwa kweSigaba II sePATH. Ngenxa yalo msebenzi kunye nezinye iiprojekthi zophando, iimpapasho ezinje:
I-Atlas ye-Atlas ye-Historic Centre ye-Central District yeHonduras.
Uhlalutyo lwendawo yokuchongwa kwamanqanaba angenelelo oluphambili ekuphuhliseni nasekuphuculweni kweZiko leMbali laseTegucigalpa naseComayagüela.
Ukufundiswa kwendawo yokwabiwa komhlaba kwipatheni ye-ozone kwiphandle kwimizi yasezidolophini.
Ubungqina bokuguqulwa kwe-hydrothermal kunye nesimbozo somhlaba esishukumisayo ngeendlela ezikude kwi-Valley yeCholuteca.
Ukusekwa kwenethiwekhi ye-geodesic yeTegucigalpa, usebenzisa ubuchwepheshe be-GPS kunye nokuqhagamshelana neenethiwekhi ezisemthethweni zokunxibelelana kwe-Central America.
I-Conformation ye-Infatial Data Infrastructure ye-UNAH ngokucaciswa kwesiqingatha sesizwe ngaphakathi kwenkqubo yeProgram yeMigaqo-nkqubo yeZizwe eziManyeneyo: i-Territory, Population and Sustainability.
Ukudala izilungiso ezintsha SEXTANTE kunye ne-gvSIG, egxile ekuphuculweni kwesicelo gvSIG-FONSAGUA ukwenzela ukucwangciswa kwamanyathelo okubonelelwa kwamanzi kunye nokucoceka kwiindawo zasemaphandleni eHonduras UDC-UNAH-UNEX.
Ezi zimbini zokugqibela ziinkqubo ezikhoyo ngoku, ezitsala umdla. Ndithethe ngomnye wabo ngaphambili kwinqaku, nangona kungengenxa yendlela iYunivesithi esele iyenzile ngoku.
I-Race of Sciences kunye neTeknoloji ye-Geographic Information.
Okwangoku i-Faculty isebenza kwiiklasi eziqhelekileyo ezisezingeni elikhethiweyo:
Isingeniso kwiinkqubo ze-Global Geopocision Systems
Isingeniso kwiNkqubo zoLwazi lweNdawo
Isingeniso ekuboneni kude
Kodwa ukusukela kunyaka 2013 kulindeleke ukuba uqale izifundo zeSidanga eyaziwa ngokuba CTIG kunye neYunivesithi innovates kule ndawo befuna ekufundiseni resource domain eliphezulu kwizifundo oluntu kwiinkalo of Science and Technology Geographic Information njengoko : I
Iinkqubo zeeNdawo zoLwazi
KwiiNdawo zeGeyile zeGeorge
Iinkcukacha zeZibonelelo zeSithuba
IiNzululwazi zeComputer ezihambelana nentsimi yeSayensi kunye neGeographic Information Technologies, ukuxhasa amacandelo ahlukeneyo kwelizwe.
Ikhondo lomsebenzi linezifundo ezingama-52, iiyunithi ezingama-231 zexabiso liceba ukuthatha iminyaka emi-5. Eyona nto intle malunga noku kukuba i-akhademi ikwicandelo layo lokusebenza, ekumiseleni iikhrayitheriya ekufuneka umfundi athe wazifumana ukuze afaneleke kwicandelo lezabasebenzi elinxulumene nalo. Isenzo esingafaniyo xa siphuhliswa yinkampani yabucala okanye ngamaqumrhu okuvuma uwonkewonke.
Kwaye inqaku elona lihle ngolu hlobo kukuqiniswa kokusebenza kwamaziko akhona, ophuhliso lwazo lwezakhono lujoliswe kwintsimi ngokuthi:
IZiko lePropathi, Icandelo loMphathiswa Wezemisebenzi Yoluntu kunye Nezezindlu, iZiko Lokulondolozwa Kwamahlathi, Icandelo Lolawulo Jikelele Leengozi Nentlekele Yendalo, Icandelo loMphathiswa Wezolimo Nemfuyo, IKhomishini Esisigxina Yamaxhala, ICandelo loKwazisa iMigodi, Icandelo loMphathiswa Wezangaphakathi Nabemi, Inkampani Amandla kaZwelonke kunye noMbane, iNkampani yezoNxibelelwano yaseHonduran, iZiko lezoKhenketho laseHonduran, iZiko leSizwe lezeNkcukacha-manani. Ukongeza, iiyunivesithi ezifanayo kunye necandelo labucala.
I-Short Career Technician kwiCadastre.
Le yiprojekthi efuna ukwahlula isidanga sokuqala ingcali ethatha isibonelelo ukuya kwinqanaba elibanzi, kwimeko yeenkosi zikamasipala apho uninzi loorhulumente basekhaya abakwazanga ukuhlawula umrhumo isidanga sebhatshela. Kwakhona ukugcwalisa isikhewu apho iCadastre kaZwelonke iye yatyeshela indima enokubakho ekuqinisekisweni kwabasebenzi ngokusekwe kubuchule.
Lo msebenzi uqukethe iiklasi ezingama-28, kunye nezifundo ezithile kwimicimbi yezemali kunye nolawulo ngamandla amakhulu. Nangona unokubakho kwimeko enokubakho.
Umbango usakwi-table design kodwa kulindeleke ukuba uhambe kwiminyaka embalwa ezayo njengoko iqondo likhuthazwa.
Unxibelelwano lwalo kunye neSofthiwe yoVulayo
Inxalenye ebalulekileyo yile nyathelo ukuvuleka kwesoftware.
It is a kwisifundo apho Ndiyathemba ukuba babandakanyeke kwenye kwicandelo kodwa mhlawumbi kwiminyaka embalwa ezayo eli gunya ingqalelo imigudu ngokusungulwa Community of gvSIG abasebenzisi, hayi nje kuba ezinye imithambo zabo ukuba ezi zixhobo kodwa ngokunxulumanisa kunye nenkxaso-mali karhulumente eSpeyin, apho liphulo izalwa kodwa ngokuqinisekileyo baya kwindawo ngokwayo kwi Americas umdla ngaphezu kwabo kubonakala eYurophu Afrika neempembelelo.
ILatin America lilizwekazi elichumileyo lesoftware yasimahla, esele siyibonile kwikona esezantsi. Oku kucace gca kungekuphela ngenxa yolondolozo olumelwe lilayisensi yesoftware emele kodwa nangenxa yamanqanaba aphezulu obusela, ukuyekiswa kwemizamo ngenxa yobuthathaka kwimisebenzi yolawulo kunye namandla anokumelwa lilizwekazi liphela elithetha ngokusemthethweni iilwimi ezimbini kuphela: iSpanish kunye nesiPhuthukezi; ngokufanayo neIberia Peninsula apho i-gvSIG yazalelwa khona.
Ngexesha elifanelekileyo kulo mzamo, sifuna iziphumo ezibalulekileyo kungekhona kuphela kwiHonduras kodwa kwingingqi yaseMntlaseMerika, sisebenzisa izithuba ezikhoyo kwaye apho okufunayo kuyisivumelwano.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iinkqubo zokulungelelanisa i-UTM eziboniswe kwiGoogle Maps
Post Next I-radiography ekhawulezayo yamaGofumadas ngaphezu kweenyanga ze-75Okulandelayo »
Impendulo enye kwi "yeeNzululwazi kunye neTekhnoloji yoLwazi lweJografi ... kunye noLuntu lwabasebenzisi be-gvSIG eHonduras"
UManuel Enrique Jimenez Rubio uthi:
Ingcali yanamhlanje ifuna ukuziqhelanisa nehlabathi kwinkqubo yotshintsho, kulwazi lweendawo ezingezizo ezobuchwephesha bakhe kodwa ezinxulumene nendawo asebenza kuyo.
Ikhosi yeeprojekthi zezakhiwo (Uhlaziyo loLwakhiwo + lweRobot + yentsimbi)
Funda ukusebenzisa Ukuhlaziya, ukuHlalutya ulwakhiwo lwerobhothi kunye neNtsimbi ye-Advance yoyilo loyilo lwezakhiwo. Zoba, uyilo kunye noxwebhu ...